न्याय माग्न गएका पीडितलाई म्यानपावर व्यवसायीद्धारा कुटपिट
बिहीवार, आषाढ ९, २०७३ साल
काठमाडौं । न्याय माग्न वैदेशिक रोजगार विभाग पुगेका एक पीडितलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीले बुधबार आफ्नो चालक प्रयोग गरेर विभागमै पिटेका छन् । पीडित कृष्ण कुँवरले उपाध्यक्ष..
काबुलमा ज्यान गुमाएकाहरु ल्याउँदा थामिएन धेरैको आँशु (फोटो फिचर)
काठमाडौं । अफगानिस्तानको काबुलमा सोमबार भएको बम हमलामा ज्यान गुमाएका १२ नेपाली शव विमानबाट ओराल्दा उनीहरुका आफन्त र त्रिभुवन विमानस्थलमा जुटेकाहरुको आँखामा आशु थामिन सकेन । शब लिएर विमान अवतरण गर्नासाथै..
द्धन्द्धग्रस्त मुलुकबाट नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन
बुद्धबार, आषाढ ८, २०७३ साल
काठमाडौं । संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले अफगानिस्थानसहित सबै द्धन्द्धग्रस्त मुलुकबाट नेपालहरुलाई फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबारको बैठकले आफ्नो मुलुक फर्कन चाहने सबै नेपालीलाई फर्किने व्यवस्था..
अफगानिस्तानमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने ८५१४, नलिई जाने कति छन ? थाहा छैन
मंगलवार, आषाढ ७, २०७३ साल
काठमाडौं । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द भुर्तेलले अफगानिस्तान घटनाको छानविनपछि सरकारले सो मुलुकलाई रोजगारीको लागि खुल्ला गर्ने कि बन्द गर्ने भन्ने विषयमा उचित निर्णय गर्ने बताएका छन । रिपोर्टर्स..
इपिएस परिक्षा आज र भोलि, ५२ हजार भन्दा बढी सहभागी हुँदै
शनिबार, आषाढ ४, २०७३ साल
काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत सातौँ इपिएस कोरिया भाषा परीक्षा आज (शनिबार)देखि हुँदैछ । परिक्षामा निरीक्षक र अनुगमनकर्ता गरी एक हजार पाँचसय खटिने जनाइएको छ । परीक्षा शनिबार र आइतबार दुई..
सबैभन्दा धेरै ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनी यस्ता छन्
आईतवार, आषाढ ५, २०७३ साल
किरण भट्टराई/काठमाडौं । पछिल्लो आठ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको सबैभन्दा बढी उजुरी महाराजगञ्जमा रहेको आरए एण्ड आर जब ट्र्याकर म्यानपावर विरुद्ध परेको भेटिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विसं २०६४..
कोरियन भाषा परीक्षाको केन्द्र निर्धारण, को कहाँ परे हेर्नुहोस्
सोमबार, जेष्ठ ३१, २०७३ साल
काठमाडौं । आगामी असारको ४ र ५ गते हुने कोरियन भाषा परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्रहरु निर्धारण गरिएको छ । इपीएस कोरिया शाखाले परीक्षार्थीको सेम्बोल नम्बर अनुसार २१ वटा परीक्षा केन्द्र..
म्यानपावरहरुको ठगीः दश हजारको ल्याप्चे लगाई आठ लाखसम्म उठाउँदै
शनिबार, जेष्ठ २९, २०७३ साल
किरण भट्टराई/काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था गरे पनि म्यानपावरले रु १० हजार लिएको कागजमा कामदारलाई सहिछाप गराउँदै भारी मात्रामा रकम असुल्दै आएको खुलेको छ । यसअघि..
मलेसियाबाट दुई महिनामा डेढ सय कामदार फिर्ता
बुद्धबार, जेष्ठ २६, २०७३ साल
काठमाडौँ। बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गएका कामदारलाई मलेसियाले अनफिट भन्दै फिर्ता पठाउन थालेपछि यसको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। दुई महिनायता बायोमेट्रिक परीक्षण गरेर मलेसिया गएका एक सय..
सरकारी कर्मचारीको तलव मात्र पाँचसय रुपियाँ !
शनिबार, जेष्ठ १५, २०७३ साल
कञ्चनपुर । सरकारी कर्मचारीले पाउने मासिक तलब पाँचसय रुपियाँ मात्रै हो भन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर कुरा साँचो हो । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाको धरमपुरस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा नियुक्त गरिएका..
घरेलु उद्योगमा सत्ताइस हजारलाई रोजगारी
मंगलवार, जेष्ठ ११, २०७३ साल
काठमाडौँ। घरेलु तथा साना उद्योगमा २७ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुलाई उद्योगमार्फत विभिन्न ठाउँमा पु¥याउँदै आएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले समितिअन्तर्गत २७ हजार ५६० जनाले..
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि उपयोगी एप 'शुभयात्रा' आयो, यस्ता छन गुणहरु
बुद्धबार, जेष्ठ ५, २०७३ साल
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि यात्रा सुरक्षित र सहज बनाउन छुट्टै मोवाइल एपको विकास भएको छ । ‘शुभयात्रा’ नाम दिइएको यो एपले विदेश जान भौतारिएका युवाहरुका साथै विदेशमा समस्यामा..
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न अस्थायी शिक्षकहरुको माग
मंगलवार, बैशाख २८, २०७३ साल
काठमाडौं । शिक्षक संघ संगठनले हालसम्म रहेका सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्घाबाट स्थायी गर्ने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन । अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन..
रोजगारी माग्दै आमरण अनशनकारीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीदेख विद्यार्थी नेतासम्मको एक्यवद्धता
सोमबार, बैशाख २०, २०७३ साल
काठमाडौं । रोजगारीको माग गर्दै झण्डै एक सातादेखि खुल्ला मञ्चमा आमरण अनशनमा बसेका युवाहरुलाई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वसेनापति रुक्माङगत कटवाल, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष रञ्जित कर्णले एक्यवद्धता जनाएका छन् । योग्यता..
रोजगारीको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेकाहरुको अवस्था गम्भीर, सरकार दबाबमा
आईतवार, बैशाख १९, २०७३ साल
काठमाडौं । स्वदेशमै रोजगारीको माग गर्दै खुलामञ्चमा विगत पाँच दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका यूवाहरुको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । संविधानले नै रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा योग्यता र..
सेनामा सिपाहीदेखि प्राबिधिकसम्मको लागि २२ सय बढीको दरबन्दी माग
बुद्धबार, बैशाख १५, २०७३ साल
काठमाडौं । नेपाली सेनामा दुई हजार भन्दा बढी विभिन्न पदका लागि नयाँ भर्ना मंगलबारदेखि खुलेको छ। नेपाली सेनाले हिजो भर्ना छनोटको एक बिज्ञान निकालेर २२ सय भन्दा बढी पदमा नयाँ..
डिजेल छोडेर सौर्य पम्पबाट माछापालन, किसान आश्चर्य मान्दै भन्छन यो त बर्दानै रहेछ
मंगलवार, बैशाख १४, २०७३ साल
खैरहनिया (चितवन)। माछापालनका लागि पोखरीमा पानी भर्न डिजेल पम्प चलाउनु पर्दा चर्को मूल्य व्यहोर्नुपर्ने समस्यामा रहेका किसानलाई सौर्य पम्पबाट निकै राहत मिलेको छ । हप्तामा दुई/तीनपटक डिजेल पम्प चलाउँदा चार/पाँच सय..
खोटो सङ्कलनबाट मनग्य आम्दानी, विदेशबाट फर्केकाको आकर्षण बढ्दो
शुक्रबार, बैशाख १०, २०७३ साल
रामपुर (पाल्पा) । फेक सोमहरका एकदेप पौडेलले बिना लगानीमा सामुदायिक वनबाट सल्लाको खोटो निकालेर आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका छन् । मासिक २० हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गरिरहेका उनले चैतदेखि कात्तिकसम्म खोटो..
विदेश पलायन र बेरोजगारी अन्त्य गर्न 'चलखेल बजार,' चन्द्रागिरिमा खुल्यो १० वटा नयाँ पसल
आईतवार, चैत्र २८, २०७२ साल
काठमाडौँ । बेरोजगारी अन्त्य तथा दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि धार्मिक र सांस्कृतिक प्रवद्र्धनसहित चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित चुन्देवी, चन्नेपाटीमा चलखेल बजार सुरु भएको छ । युवाको विदेश पलायन रोक्न र आर्थिक विकासको लक्ष्यसहित..
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बिमाङ्क रकम दोब्बर वृद्धि गरी १० लाख रुपियाँ पुर्याइने
बुद्धबार, चैत्र २४, २०७२ साल
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको म्यादी जीवन बिमाको बिमाङ्क शतप्रतिशत नै वृद्धि भई १० लाख रुपियाँ पुग्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले यसअघि बिमाङ्क रु पाँच लाख..
इपिएस भाषा परीक्षा आगामी असार ४ र ५ गते, वैशाख १५ देखि १८ दरखास्त संकलन
सोमबार, चैत्र २२, २०७२ साल
काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत लिइने कोरीयाली भाषा परीक्षा आगामी असार ४ र ५ गते हुनेभएको छ ।श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको निर्देशक समितिकोे बैठकले..
फ्रि भिसा–टिकट खारेज गर्न मन्त्रीदेखि संसदीय समितिलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास
काठमाडौं । खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकट (फ्रि भिसा–टिकट)को व्यवस्थाबाट पछि हट्न चलखेल भइरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा विभिन्न सङ्घ सङ्स्था दबाबमूलक..
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आन्दोलन विनाउपलब्धी तुइयो
बुद्धबार, चैत्र १७, २०७२ साल
काठमाडौं । प्रहरीले एक दर्जन वैदेशिक रोजगार कम्पनीमा छापा मारेको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आन्दोलन चौतर्फी विरोध र आफैमा विभाजित भएपछि तुइएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी..
अनिश्चितकालिन आन्दोलन घोषणा गरेका म्यानपावर कम्पनीहरु धमाधम स्वीकृति लिँदै
शुक्रबार, चैत्र १२, २०७२ साल
किरण भट्टराई/काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले गत फागुन २३ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि कामदार विदेश पठाउन बन्द गरेर सुरु गरेको आन्दोलन असफलतातर्फ उन्मुख भएको छ । प्रहरीले गत फागुन १२ गते..
प्रहरीमा जागिर खान पूर्वाञ्चलमा मात्रै छ हजारको आवेदन
शनिबार, चैत्र ६, २०७२ साल
पथरी (मोरङ)। नेपाल प्रहरीको विभिन्न पदमा भर्ना हुन पूर्वाञ्चलमा ६ हजार युवायुवतीले आवेदन दिएका छन् । पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र भर्ना छनोट शाखाका प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद बरालका अनुसार पूर्वाञ्चलका १६..
खाने होइन त जागिर ? पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई चाहियो दुई हजार छ सय प्राविधिक
शुक्रबार, चैत्र ५, २०७२ साल
काठमाडौँ ।आवश्यक कर्मचारी नभएर थला परेको जस्तै अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले शुक्रबार करिब २६ सय प्राविधिकका लागि नयाँ दरबन्दी माग गरेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो पुनर्निर्माण कामलाई अघि बढाउन शहरी..
डीडीसीमा खुल्यो ७४ जनाको लागी नयाँ रोजगारीको अवसर (सूचनासहित हेर्नुस्)
सोमबार, चैत्र १, २०७२ साल
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले विभिन्न श्रेणी तथा पदका लागि ७४ जना नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी आह्वान गरेको छ । संस्थानले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै अधिकृतस्तरका १६ र सहायकस्तरमा ५८ जना..
रत्न मगरको नेतृत्वमा एकसोडस ट्रेकिङ एण्ड एक्पिडिसन
बिहीवार, फागुन २०, २०७२ साल
काठमाडौं । प्रतिस्ठानस्तरको ट्रेड युनियन एकसोडस ट्रेकिङ एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.को चौंथो अधिवेसनले रन्तबहादुर मगरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । बुधबार सम्पन्न अधिवेसनले उपाध्यक्षमा पेमा नुरु शेर्पा, सचिवमा ङिमा शेर्पा,..
फागुन २२ गतेदेखि कामदार पठाउन बन्द गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको चेतावनी
शुक्रबार, फागुन १४, २०७२ साल
काठमाडौं । प्रहरीले बुधबार १७ म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेर केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको विरोधमा सबै म्यानपावरले आज कार्यालय बन्द गरेका छन् । सङ्घको बिहीबारको बैठकले आगामी फागुन २२ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि..
नेपाली दूतावासले रोक्यो मलेसियामा कामदार प्रमाणिकरण
मंगलवार, फागुन ११, २०७२ साल
काठमाडौँ।मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नयाँ नेपाली कामदारको लागि मागपत्र प्रमाणिकरण कार्य तत्कालका लागि रोकेको छ ।मलेसिया सरकारको गृह मन्त्रालयले केही दिन अगाडी मात्रै विदेशी कामदार तत्कालको लागि नलिने घोषणा गरेको थियो..
Results 113: You are at page3of 4